04 | novembre | 2010 | GAZETY_ADALADALA
Hetsi-panoherana any amin’ny tanàna maro…
Posted on 04/11/2010 by gazetyavylavitra
Rahampitso 5 Novambra 2010 dia hisy hetsi-panoherana atao any amina tanàna maro maneran-tany hiadiana amin’ny sivana mahazo ny aterineto.
Ity eto ambany ity dia dika malalaky ny fanentanana navoaka tao amin’ny tranonkala remember5 mikasika azy io.
Ry namana isany:
Tandindonin-doza ny aterineto. Efa manindrahindra ny fepetra manohitra ny P2P ataony ireo governemanta maneran-tany, andraman’izy ireo ny manakatona ny varavaramben’ny loharam-panovozam-pahalalàna sy fifanakalozam-baovao midadasika nanaovantsika ny aterineto. Nefa tsy hamèla azy ireo handresy dieny aty amin’ny dingana voalohany isika. Voalohany dia nangalarin-dry zareo ny P2P-ntsika, avy eo nangalariny ny Wikileaks, avy eo atombok’izy ireo terena tsikelikely ny fahalalàhan’ny vaovao izay tanjona nokinendrintsika, ary avadiny ho amin’ny tombontsoany ny asa famoronana nampiavaka iny arivo taona farany iny. Saingy tsy avelantsika handresy ry zareo. Tsy omentsika azy ireo ny P2P-ntsika, tsy omentsika azy ny fahafahantsika. Antsika ny aterineto fa tsy azy ireo. Ary izany no tsy maintsy ampahatsiahivintsika azy ireo…ary aza adino velively.
Ny eritreritray dia ny hikarakara andiana hetsika am-pilaminana iarahan’ny daholobe amin’ny 5 Novambra ho avy io, ary manerana izao tontolo izao, ho fanoherana ny sivana atao eo amin’ny aterineto sy ny ezak’ireo governemanta hifehy ny aterineto.
Ity tetikasa ity dia zavatra iaraha-manomana ary afaka manampy koa ianao. Azon’ny tsirairay izay misoratra atao printy ity Wiki ity (tsy ilaina ny mailaka/mombamomba anao), noho izany tena raisina an-tànan-droa daholo izay fanampiana rehetra.
Manifesto (amin’ny teny anglisy daholo ny rohy) momba ny zava-kinendrinay, ny mandrisika anay..
Toerana hisian’ny hetsika (tsy hitanao ao ve ny anareo? ampidiro e!)
Fampahafantàrana mba hanelezana azy ity manerana ny aterineto
Afaka koa ianao manao printy ny sarontavanao:
amin’ny endriny 2D miloko : http://imgur.com/YgzEm.jpg
amin’ny endriny 2D mainty sy fotsy :http://imgur.com/d3H8P.jpg
amin’ny endriny 3D : http://www.mediafire.com/?o24hd9ykjb4b409 | fitaratra : http://www.xup.in/dl,17944024/Guy_Fawkes_Mask.pdf
Fantsona IRC ofisialy: irc.anonops.net #remember
Kabary fiarahabàna (sombiny)
[…] Fa ahoana no nitrangàn’izany? Iza no homena tsiny? Eny ekena fa misy ny tena tompon’andraikitra bebe kokoa noho ny hafa, ary dia hotazonina ho tompon’andraikitra tokoa izy ireo, saingy ndeha ho lazaina ny marina, raha tena te-hitady ny meloka ianao dia tsy ampy ny mijery fitaratra fotsiny. Fantatro ny antony nanaovanao izany. Fantatro fa matahotra ianao. Iza no tsy toy izany? Ady, horohoro, aretina. Be ny olana mifamahofaho mety hanodinkodina ny fahaizanao mandanjalanja ary mamily anao hiàla ny làla-mahitsy. Nandresy anao ny tahotra, ary tao anatin’ny fisavoritahanao dia nomenao ny manam-pahefana ny zon’ny mpamorona. Nampanantena vola anao ry zareo, nampanantena hasambarana, ary ny tamibiny angatahan-dry zareo dia ny fahanginanao, ny fanekena fahatany. Halina dia nitady izay hamakiana izay fahanginana izay aho. Efatra herinandro izao no lasa, noravako ny tranonkalanao, mba hanairana an’izao tontolo izao hoe inona moa no zavatra adinony. Efa ho maherin’ny efajato taona lasa izao no nisy olo-malaza naniry ny hametraka ny fahadimin’ny Novambra ho ao anaty tadidintsika mandrakizay. Ny fanantenàny dia ny hahatsiarovan’izao tontolo izao fa tsy teny fotsiny ny hoe fitoviana, fahamarinana ary ny fahalalàhana […] Noho izany, raha tsy nahamarika na inona na inona ianao, raha toa tsy fantatrao ireo heloka bevava nataon’io governamanta io dia aleo ianao hatoroko hevitra mba hamèla ny fahadimin’ny Novambra handalo ho toy ny tsy nisy. Nefa raha mahita ny hitako ianao, raha mahatsapa izay tsapako, raha te-hikaroka izay karohako, dia mangataka anao aho hitsàngana eo anilako amin’ny fahadimin’ny Novambra, eo ivelan’ny varavaramben’ny Parlemanta, ka isika miaraka no hanome azy ireo fahadimin’ny Novambra iray izay tsy ho adino na oviana na oviana.
Marihan’ny Gazety_Adaladala eto am-pamaranana fa hetsika any ivelany izy ity ho fiadiana amin’ny sivana atao amin’ny aterineto. Na dia tsy hisy hetsika toy izay aza hatao eto Madagasikara, dia angatahana kosa isika rehetra mety ho efa nianjadian’izay resaka sivana izay, na taloha, na amin’izao fotoana mba handefa izany any amin’ny (poli_fika@yahoo.fr), hanome ny andinindininy sy ny rehetra mikasika izany. Ho tazonina ho tsiambaratelo ny resaka ifanakalozana ao ary raha misy aza ny eritreritra hamoaka ny ampahany amin’izy ireny dia tsy maintsy hakàna ny teny ifampierana avy aminareo nandefa azy. Mety ho azo atao mantsy ny mamoaka sy mitantara an’izany ao amin’ny ADVOCACY, ao amin’ny Global Voices Online, mba hifampizaràna sy hahafantaran’ny erantany ny zava-misy eto amin’ny tanintsika araka izay fahitàn’ny tsirairay azy, tsy anavahana firehana, finoana sns…
Hisy koa atsy ho atsy ny #TEDxTana 2010 hatao ao amin’ny Cafe de la Gare Soarano, ka asa raha mety ho isan’ny lohahevitra hosafoina mandritra io hetsika iraisam-pirenena io koa ny amin’izay. Ny resaka Angovo Maitso moa no tena lohahevitra lehibe hobanjinina ao, saingy malalaka be ny fifanakalozan-kevitra amin’ny resadresaka ifanaovana amin’ny hetsika TEDx toy itony
Filed under: #TED, anao ny fitenenana, aterineto, fifandraisana iraisam-pirenena, haino amanjery, haitao, politika, tapatapany | Tagged: #TED, 5 Novambra, Advocacy, Antananarivo, Global Voices Online, remember5, sivana, Soaranao |	Leave a comment »